Itinye n'ọkwa Brazing Carbide Tipping on Cutting Steel Tool Ngwa
A na-eduga emeputa nke CBN na PCD ịcha ngwaọrụ chọrọ dịkwuo ha arụpụtaghị ihe site na Elekwasị anyaING okpomọkụ on a nnọọ obere ebe ka ewere belata okpomọkụ ọnwụ ma melite a carbide ịkụnye usoro.
Usoro Brazing na-abanye na ya:
Onye ahịa ahụ nyere ahụ mmadụ nke a triangle, akụkụ ọ bụla ~ 16.5 mm (0.65 sentimita asatọ). Na itinye n'ọkwa brazing carbide tipping A ga-emerịrị na triangle equilateral 3 mm (0.11 sentimita asatọ) na nsọtụ. Mpaghara kpo oku nke akụrụngwa ígwè ahụ bụ 43 mm (1.69 sentimita asatọ) OD x 25 mm (0.98 sentimita) n'ogologo. Ejiri usoro kpo oku DW-UHF-6kW-II iji ruo 1600 ° F (870 ° C) wee mezue usoro ahụ na 8 sekọnd. Ihe eji emeputa ihe ndi mmadu na-etinye oku n'ime ebe a na-etinye carbide ma belata oge okirikiri.
DW-UHF-6kW-II sistemụ kpo oku na ahaziri ahazi braduu codu induction Ejiri iji kwado usoro achọrọ.
Industry: Ngwaọrụ & Akụrụngwa
Categories Technologies Tags brazing, brazing carbide, Brazing Carbide Tipping, brazing carbide tipping ngwaọrụ, Ntughari brazing, brazing ọnwụ ngwaọrụ, HF na-egwu egwu, ume nkwado, Itinye n'ọkwa Brazing Carbide Tipping, Ngwunye brazing na-egbu ihe, Ngwunye ihe eji eme brazing Mail igodo